अप्रिल २१ गुगलको मोबाइलगेडेन हो! मोबाइल एसईओ को लागी तपाइँको चेकलिस्ट Martech Zone
के हामी डराएका छौं? होइन, त्यसो होइन। मलाई डर छ कि मोबाइल प्रयोगको लागि अनुकूलित नभएका साइटहरू पहिले नै खराब उपयोगकर्ताको कुराकानी र स from्लग्नताबाट ग्रस्त थिए। अब गुगलले सजिलैसँग एल्गोरिदमहरू अपडेट गर्दै साइटहरूलाई पुरस्कृत गर्दछ जुन मोबाइल खोजीमा उत्कृष्ट श्रेणीकरणको साथ मोबाइल प्रयोगकर्ताको लागि अनुकूलित छ।
अप्रिल २१ बाट, हामी एक रैंकिंग संकेत को रूप मा मोबाइल मित्रता को उपयोग को विस्तार हुनेछ। यस परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा सबै भाषाहरूमा मोबाइल खोजीहरूलाई प्रभाव पार्छ र हाम्रो खोज परिणामहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। फलस्वरूप, प्रयोगकर्ताहरूले सजिलो, उच्च गुण खोजी परिणामहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ जुन तिनीहरूका उपकरणहरूको लागि अनुकूलित छ। गुगल खोज कन्सोल
यदि तपाईं मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो चालले समग्र अर्थ दिन्छ। छैन साँच्चै को दुःस्वप्न सबैलाई SEO उद्योग मा चिच्याइरहेको छ। मलाई लाग्छ प्राय: hype लाई मुख्य समस्यामा दर्साउँछ खोज उद्योग - श्रेणीकरण मा धेरै ध्यान र प्रयोगकर्ता संलग्नता र रूपान्तरण मा पर्याप्त ध्यान छैन। एसईओ परामर्शदाताहरु आफ्नो ग्राहकहरु को साइटहरु धेरै समय पहिले तय गरिएको थियो यदि तिनीहरू सही मेट्रिक्समा ध्यान केन्द्रित गर्दै थिए।
हामी प्रयोगको सुझाव दिन्छौं गुगलको मोबाईल-मैत्री परीक्षण र वेबमास्टरको मोबाइल उपयोगिता रिपोर्ट तपाइँको साइटहरूको साथ कुनै पनि उल्लेखनीय मुद्दाहरूको समस्या निवारण र सुधार गर्न। यहाँ बाट एक पूर्ण इन्फोग्राफिक छ नौ हर्ट्ज, तत्काल शिफ्ट, र एन्टिपल.
टैग: अप्रिल 21गतिशील सेवा गर्दैगुगल मोबाइल एसईओगुगल एसईओमोबाइल खोजीमोबाइल एसईओमोबाइल साइटमोबाइल व्यूपोर्टमोबाइल वेबसाइटमोबाइलगेडेनप्रतिक्रियाशील साइटहरूअलग यूआरएलभ्यूपोर्ट
अप्रिल 13, 2015 मा 10: 11 एएम
हाम्रो वरिष्ठलाई विश्वास दिलाउन महान् स्रोतहरूको शृंखलामा यो अर्को हो जुन हामीले अपडेट गर्न आवश्यक छ। परिवर्तन देखिन गाह्रो हुन्छ जब सबै देखिन्छ प्रारम्भिक लगानीको डलर चिन्ह हो ...
अप्रिल 13, 2015 मा 7: 35 PM
मलाई लाग्छ कि यो दुबै विडम्बनाजनक छ र Google लाई धक्का दिनको लागि यो कपटपूर्ण छ जब गुगल सेवाहरू आफैंमा नराम्रो अपराधीहरू बीचमा छन्।
उदाहरणका लागि गुगल फन्टहरू र एनालिटिक्स जस्ता चीजहरूलाई ब्लक गर्ने (रेन्डरिंग) र गति मुद्दाहरूको कारण राम्रोसँग परिचित छ।
जबकि म पूर्ण हृदयले सहमत छु कि हामी सबै मोबाइल मैत्री हुनु पर्छ, हामीलाई तपाईले सिफारिश गर्नु भएको दुई गुगल सेवा भन्दा राम्रो उपकरण चाहिन्छ।
गुगलको मोबाईल उपयोगिता परीक्षकले दिनको कुन समयको आधारमा फरक परिणाम दिन्छ। कहिलेकाँही तपाई भयानक रूपमा मोबाइल मैत्री हुनुहुन्छ र अन्य समयमा तपाईको छैन,
र गुगलको वेबमास्टर उपकरणहरू राम्रोसँग परिचित छन् यसका नतीजाहरूको साथ सधैँ आशापूर्वक म्याद सकियो।
जहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुनेछ कुन पृष्ठमा यसलाई मोबाइलले अनौंठो रूपमा एक महिना भन्दा बढी मानेको छ, त्यहाँ यसलाई अपडेट गर्ने कुनै तरिका छैन र यो थाहा दिनुहोस् कि तपाईंले मुद्दाहरू कहिले तय गर्नुभयो।
प्लस मैले वर्षौं पहिले संरचित डाटा मार्कअप राखें र म अझै WMT लाई पूर्ण रूपमा रेकर्ड गर्न को लागी प्रतिक्षा गर्दैछु।
त्यसोभए तपाईंले अचम्म मान्नुपर्दछ, यदि गुगलले साईटहरूलाई दण्ड दिन सुरु गरिरहेको छ भने, के यसले पुरानो डाटा वा हालको डाटामा आधारित हुनेछ?
के गुगलले जब सबैलाई सुचित गर्ने सुचित अवसर दिदैछ कि ती मुद्दाहरू निश्चित भएको बेला?
यस समयमा त्यो असम्भव देखिन्छ।
अप्रिल 13, 2015 मा 11: 10 PM
मार्क, म कुनै कुरामा असहमत छैन। यद्यपि गुगल वेबमास्टर्सले तपाईको साइटको परीक्षणको लागि बृहत् टूलसेट निर्माणमा साँच्चिकै राम्रो काम गरेको छ। वेबमास्टरहरूको लागि दर्ता गर्न निश्चित गर्नुहोस्, तपाईंको साइट जोड्नुहोस्, र परिणामहरू हेर्नुहोस्। तीनिहरूले तपाईलाई पिक्सलमा सबै समस्या निवारण गर्न मद्दत गर्छन्।